Isbitaalka Pumwani oo laga helay meydadka 12 dhallaan ah – The Voice of Northeastern Kenya
Isbitaalka Pumwani oo laga helay meydadka 12 dhallaan ah
Star FM September 17, 2018
Waxaa maanta isbitaalka ay hooyooyinka ku umulaan ee Pumwani ee magaaladatani Nairobi laga helay meydadka 12 dhallaan ah.
Guddoomiyaha caasimadda dalka ,Mike Sonko ayaa maanta halkaasi ku tagay socdaal lama filaan ah.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Mike Sonko uu isbitaalka ku tagay dhugdhugley.
Hasa ahaate waxaa uu ka carooday in mid ka mid ah shaqaalaha isbitaalka uu isku dayay inuu khiyaano isagoo barasaabka u sheegay in 24-kii saacadood ee la soo dhaafay hal canug keliya uu goobta ku dhintay .
Mike Sonko ayaa canaantay mas’uulkaasi kadib markii uu arkay meel la geliyay meydadka 6 dhallaan ah halka meel kalena ay ku jireen 5 kale.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in cid waliba oo dhacdadaasi mas’uuliyadeeda leh lala xisaabtamayo.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay inaan marnaba la ogolaan doonin in hooyooyinka iyo gabdhaha halkaasi u raadsada adeegyada ay dhibaatooyin loo fiirsan la kulmaan.
Sido kale Mike Sonko ayaa kala diray maamulka sare ee isbitaalka iyadoo sarakiisha ay tallabadan saameysay ay kala yihiin madaxii isbitaalka, Catherine Mutinda, sarakiil maamulka qaabilsan sida Zadock Angahya iyo George Nyadimo iyo Dr James Kamau oo ku takhasusay xanuunada dumarka.
Bayaan ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee guddoomiyaha Nairobi ayaa lagu sheegay in meydadka carruurta ee la arkay lagu wargeliyay booliska ka howlgalo saldhiga Pangani.
Booliska ayaa guda galay baaritaano lagu xaqiijinaya sababta keentay inay dhallaanka halkaasi ku geeriyoodaan.
← Wafdigii labaad oo ka socda aqalka saree e Soomaaliya oo u anba baxay magaalada Kismaanyo.
Dubat Cali Camey oo kamid ah odayasha magalada Garissa ayaa waalidiin iyo dhamaan bulshada qay baheeda kala gadisan ugubaaqay in ilamaha ay ka talaalan cudurka dabeesha ayna ka faa iidaystaan ita uu socda oloolaha talaalka cudurka dabeesha o ah cudur naafanma sababi kara qofki uu ku dhaca. →